၂၀၁၀ပြက္ခဒိန်လေးတွေကို မျှော်နေကြမဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို အထူးတောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ၂၀၁၀ပြက္ခဒိန်ကို ဇန်န၀ါရီလလည်လောက်မှာ တင်ပေးပါ့မယ်နော်။
နိုဝင်ဘာလတောက်လျှောက် အလုပ်တွေများနေပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ၂၀၀၉နှစ်မကုန်ခင် ပြက္ခဒိန်လေး ပြီးအောင်လုပ်မယ်၊ နှစ်သစ်စတာနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင်တင်ပေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူအောင်ဘယ်လို ဒီဇိုင်းလေးလုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုပုံလေးတွေထည့်မယ်၊ ဘာကဗျာလေးတွေသုံးမယ်လို့ စဉ်းစားရတာလည်း အမောပါ။
ဒါပေမဲ့ အလုပ်တွေက မထင်မှတ်ပဲများပြီး လက်မလည်နေတာနဲ့ ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ဘက်ကို အချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အချိန်ရှိသလောက်လေး ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပေမဲ့ ရုံးမှာ နှစ်ကုန်ခါနီး ပရောဂျက်တွေအမှီပေးနိုင်အောင်စိုင်းပြင်းနေရတာနဲ့၊ နှစ်ကုန်ခါနီး ခရီးထွက်စရာလေးလည်း ရှိနေတာနဲ့ နှစ်သစ်အမှီ ပေးနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူးဆိုတာ အသိပေးပါတယ်ရှင်။ ပြက္ခဒိန်ကို ကမန်းကတန်းနဲ့ ပြီးစလွယ်လည်းမလုပ်ချင်လို့ ဇန်န၀ါရီလလည်လောက်ကြမှပဲ တင်ပေးပါတော့မယ်လို့ အထူးတောင်းပန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်....။
မနှစ်ကလိုပဲ ဒီဇိုင်း၂မျိုးနဲ့ လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ပြက္ခဒိန်စောင့်စားနေသူများကို မလေးစားသလို ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ၊ နောက်ကျသွားတာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါရှင်။
Posted by စုချစ် at 12/11/2009 12:22:00 PM 8 comments:
တနေ့တွင် မင်းတုန်းမင်းတြားကြီးသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်အား နန်းတော်သို့ပင့်ကာ ဆွမ်း လုပ်ကျွေးပြီး တရားဒေသနာ နာကြား၍အပြီးတွင် လျှောက်ထားသည်မှာ....
''တပည့်တော်အနေဖြင့် စိတ်ထဲတွင် မရှင်းလင်းသည့် ကိစ္စတရပ်ကို အခွင့်သင့်တုန်း လျှောက်ထားလို ပါသည်''
''မြတ်စွာဘုရားသည် သတ္တ၀ါများအား ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ တရားရေအေးတိုက်ကျွေးပါလျှက် အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သရဏဂုံသာတည်၍ အချို့မှာ သောတာပန်၊ အချို့မှာ အနာဂါမ် တည်ကြသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း'' ဟု'' တပည့်တော်စဉ်းစား၍ မရနိုင်သဖြင့် အရှင်ဘုရား ရှင်းလင်းမိန့်ကြားပါရန် လျှောက်ထား အပ်ပါသည်ဘုရား''
ုတကာတော်သိလိုသည့်အချက် အကွက်ကျကျ ဥပမာပြောရလျှင် ရှေးအခါက ရွာတရွာမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဗေဒင်ပညာကို အထူးပင်ဝါသနာပါ၍ ဒီသာပါမောက္ခဆရာထံ ဗေဒင် ပညာ သင်ယူဆည်းပူးရန်တိုင်ပင်၍ အတူပင်သွားကြလေသည်။
စွယ်စုံပညာကို သင်ကြားပေးနိုင်သည့် ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးကရောက်ရှိလာကြသည့် တပည့် နှစ်ဦးအား....
ဟုမေးလေသည်။ ထိုအခါ တပည့်နှစ်ဦးက...
ု''ဗေဒင်ပညာကို အဓိကထားပြီး သင်ယူလိုပါသည်''
ဟုပြောလေရာ၊ ဆရာကြီးက ဗေဒင်ပညာကိုအသားပေးပြီး သင်ကြားပေးလေသည်။ တပည့် နှစ်ဦးတို့သည် ဗေဒင်ပညာကို တစ်နှစ်ကျော်မျှ သင်ယူမိကြသောအခါ အတော်ကျေနပ်လောက်အောင်ပင် သင်ယူမိကြလေသည်။
ထို့နောက်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည် ဒီသာပါမောက္ခ ဆရာကြီးအား ခွင့်ပန်ပြီး မိမိရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီးကလည်း ဆုများပေးပြီး ပြဿနာရှိလျှင် လာခဲ့ကြဟု မှာကြားလေသည်။
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည် မိမိရွာသို့မရောက်မှီ လမ်းခုလပ်အကြား ရွာတရွာသို့ နေ၀င်ဖြိုးဖြ ရောက်ရှိသွားကြလေသည်။ ထိုရွာတွင် မိတ်ဆွေအသိတစ်ယောက်ရှိသည်နှင့် ၀င်ရောက် တည်းခိုကြသည်။ ၄င်းအသိမိတ်ဆွေအိမ်တွင် မိန်းမဧည့်သည်တစ်ယောက်လည်း ရောက်ရှိနေသည်။
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည် အိမ်ခံမိတ်ဆွေနှင့် စပ်မိစပ်ရာပြောကြရင်းက မိမိတို့သင်ယူလာ သည့် ဗေဒင်ပညာအကြောင်း ရောက်ရှိသွားကြသည်။ ထိုအခါ မိန်းမဧည့်သည်ကလည်း အပျိုရှာကညာတွေ့၊ အချိုရှာသကာတွေ့ ဖြစ်သွားလေသည်။
''နေပါအုံး...ဆရာလေးတို့ရဲ့ ကျမမေးစမ်းပါရစေအုံး'' ဟု မိန်းမဧည့်သည်က ကြားဖြတ်၍ မေးလိုက်လေသည်။
''ဟုတ်ကဲ့... မေးပါ... အလိုရှိတာကို မေးနိုင်ပါတယ်''
ဖိုးဖြေချင်... ဖိုးတွက်ချင်ဖြစ်နေကြသည့် လက်သစ်ဗေဒင်ဆရာနှစ်ဦးတွင် တဦးကပြောလိုက် ရာ...
''ကျမခင်ပွန်း အရပ်တပါးသို့ စီးပွားရှာသွားတာ နှစ်ခါလည်ကျော်သွားပြီ ဆရာလေးတို့ရဲ့၊ အဲဒါစာလဲမလာ လူလဲမရောက်ဖြစ်နေလို့ ဆရာလေးတို့တွက်ပေးစမ်းပါ '' ဟုပြောဆိုသည်။
ခုနှစ်သက္ကရာဇ် နေ့ရက်များမေးပြီး ပထမသူငယ်ချင်းက တွက်ချက်၍ ''ခင်ဗျားခင်ပွန်းသေပြီ '' ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
ဒုတိယသူငယ်ချင်းကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့်တွက်ချက်ပြီး ''ခင်ဗျားခင်ပွန်းသေတာမှ ကမ်းနားမှာ ကျားခဲလို့သေပြီ'' ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
ထိုမိန်းမသည် နောက်တနေ့နံနက်တွင် ဗေဒင်ကိန်းအရ ကမ်းနားသို့သွားရှာရာ တကယ်ပင် မိမိ ခင်ပွန်း ကျားစားထားသည်ကို ကမ်းနားစပ်တွင် တွေ့ရတော့သည်။
ဤတွင်ပထမသူငယ်ချင်းသည် သူ၏ဟောချက် မတိကျမရေရာ၍ များစွာမကျေမနပ်ဖြစ်သွား သည်။
''ဟေ့... သူငယ်ချင်း ဆရာကြီးက ဗေဒင်ပညာကို မင်းကိုပိုပြီးသင်ပေးတယ်ကွ၊ငါ့ကျတော့ မရေရာ ဘူး'' ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
''ဟ...သင်ပေးတာတော့ အတူတူရှိမှာပါပဲကွ၊ ငါ့ပိုပြီး သင်ပေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး '' ဟု ဒုတိယ သူငယ်ချင်းက ပြောလေရာ...
''သင်ပေးတဲ့ အချိန်လဲအတူတူ၊ လက်ဆောင်အသပြာပေးရတာလဲအတူတူ၊ ငါတော့မကျေနပ်ဘူး ကွာ၊ ဆရာကြီးထံပြန်ပြီးမေးကြမယ်'' ဟု ပြောပြီး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တို့သည် ဒီသာပါမေက္ခ ဆရာကြီးထံ ပြန်လည်၍ သွားကြလေသည်။
ဒီသာပါမေက္ခဆရာကြီးသည် တပည့်နှစ်ယောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်ကို အကဲခတ်မိလေ သည်။ ဆရာကြီးက တပည့်တို့အား ''မင်းတို့... ခရီးလဲပမ်းလာကြတယ်၊ နားနားနေနေပေါ့ကွာ၊ မနက်လင်းမှပဲ စကားစံမည်ပြောကြတာပေါ့၊ ကဲအိပ်ကြအုံး၊ အိပ်ကြအုံး'' ဟု ပြောလိုက်သည်။
နံနက်ခင်း ဝေလီဝေလင်း လက်ကြားမမြင့်တမြင့် အချိန်တွင် ဆရာကြီးက '' ရော့... ဟောဒီ အရွယ် တူညီသည့်အိုးနှင့် မြေပေါ်မခသေးတဲ့ နှင်းရည်ကို ပြည့်အောင်ခတ်ခဲ့ကြ'' ဟု ပြောပြီး အရွယ်တူသည့် အိုးကလေးနှစ်လုံးကို တလုံးစီပေးလိုက်လေသည်။
တပည့်နှစ်ယောက်တို့သည် ရေးကြီးသုတ်ပြာ အိုးကိုယ်စီယူပြီး နှင်းရည်များသွားခံကြသည်။ ပထမ တပည့်က နှင်းရည်အမြန်ရလိုဇောဖြင့် သစ်ပင်တပင်မှတပင်ကူးပြီး အိုးကို အောက်ကခံကာ သစ်ကိုင်းများကို လှုပ်ချလေသည်။
ဒုတိယတပည့်မှာမူ ခေါင်းမှ ပုဝါကိုချွတ်၍ ၄င်းပုဝါနှင့်ပင် မြက်၊သစ်ပင်တို့အပေါ်မှ နှင်းရည်ကို စိုစွတ်စေပြီး အိုးထဲသို့ ညှစ်ထည့်လေသည်။
နေခြည်ရောက်၍ နှင်းပျောက်လာသည့်အခါ နှင်းရည်များကို ယူ၍မရတော့ချေ။ တပည့်နှစ်ဦးတို့ သည် မိမိတို့ရရှိသည့် နှင်းရည်ကို တဦးကိုတဦးကိုအား အသိမပေးဘဲ ဆရာကြီးထံပြန်၍ နှင်းရည်အိုးများ ပေးအပ်ကြလေသည်။ အိုးနှစ်လုံးထဲတွင် ပထမလူ၏ နှင်းရည်ကနည်း၍ ဒုတိယတပည့်၏ နှင်းရည်အိုးမှာ ပြည့်လုမတက် ရလာလေသည်။
ဤတွင်ဆရာကြီးက ''မင်းတို့ကို ပညာပေးတဲ့နေရာမှာတော့ အတူတူပေးတာပဲ၊ ပညာခံယူတဲ့ တပည့်ရဲ့ ဥာဏ်အပေါ်မှာသာ အဓိကဘဲ '' ဟုပြောပြီး တပည့်နှစ်ဦးအားပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လေ သည်။
''ဒီဥပမာအတိုင်းဘဲ တကာတော်ရေမြေ့ရှင်ရဲ့၊ ဟောကြားတဲ့တရားကတော့ အတူတူပါပဲ၊ နာယူ မှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အဇ္ဈာသယကသာ အဓိကဘဲ'' ဟု ဗန်းမော်ဆရာတော်က မင်းတုန်းမင်း တရားကြီးအား မိန့်ကြားလိုက်ရာ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် များစွာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်သွားလေသည်။
Posted by စုချစ် at 11/10/2009 01:50:00 PM3comments:
ဗန်းမော်နှင့် မယ်ကင်း စစ်ကိုင်းမှာတွေ့ခြင်း
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် မင်းတုန်းမင်းကို စိတ်နာ၍ စစ်ကိုင်းပိတောက်ချောင်မှာနေစဉ် သီလရှင်မယ်ကင်းမှာလည်း တပည့်တပန်းများစွာနှင့် စစ်ကိုင်းချောင်တွင် စာပေပို့ချနေသည်။
တနေ့တွင် သီလရှင်မယ်ကင်းက မိမိချောင်အတွင်း၌သီးသော သင်္ဘောသီးလှလှကြီးတလုံးရ၍ တပည့်သီလရှင်များအား ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံ ကပ်လှူစေခိုင်းလိုက်ပြီး သီလရှင်နှစ်ဦးကို အမှာစကားပါးလိုက်သေးသည်။
''ဗန်းမော်ဆရာတော်ကများ မင်းတို့ဆရာက သင်္ဘောသီးကြီးလှူပြီး ဘာဆုကို တောင်းလိုက်သေးသလဲ မေးခဲ့ရင် (ဘုရားဆုကို တောင်းပါတယ်) လို့ လျှောက်ပါဘိ'' ဟူ၍မှာကြားလိုက်သည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံ ရောက်၍ သင်္ဘောသီးကို သီလရှင်ဆရာကင်းက အကပ်ခိုင်းကြောင်းလျှောက်ထားသည့်အခါ ထင်သည့်အတိုင်းပင် ဆရာတော်က မေးတော့သည်။ သီလရှင်များကလည်း ဆရာကင်းက မှာသည့်အတိုင်းပင် လျှောက်တင်လိုက်လေသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်၏စိတ်တွင် ကြီးကျယ်လိုက်တာဟု ထင်တော်မူသည်လား မပြောတတ်၊ ရုတ်ချည်းပင်...
''အေး.. နင်တို့ဆရာကို ပြောလိုက်၊ ဘုရားဆုလိုချင်ရင် ငါ့ပေါင်ကြားထဲကဟာ နင့်ပေါင်ကြားထဲရောက်အောင် အရင်ဆုတောင်းအုံး'' ဟု မှာကြားလိုက်လေသည်။
ဆရာတော်၏ဆိုလိုရင်းမှာ ဘုရားဆုကိုပန်လျှင် ယောက်ျားဘ၀ကိုရအောင် အရင်တောင်းအုံး၊ ယောက်ျားဘ၀ရမှ ဘုရားဆုပန်လို့ရမှာဟူ၍ ဆိုလိုဟန်ရှိပေသည်။
သီလရှင်များ ဆရာကင်းထံ ပြန်ရောက်လေလျှင် ဆရာတော်၏စကားကို ပြန်လည်ပြောကြားလေတော့သည်။ ဆရာကင်းမှာလည်း မာနတံခွန် ထူနိုင်သည့်ကာလမို့ စပ်စပ်ထိမခံ အမှန်ကိုမဆင်ချင်နိုင်ဘဲ ရုတ်တရက် ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲကာ ဒွေးချိုးတပုဒ် ရေးစပ်၍ တပည့်များကို အပို့ခိုင်းလိုက်တော့သည်။
''အဖျားရယ်ပေ၊ အနားခွေ မခိုင်ပြန်ခါမှ၊ မြိုင်ရပ်ကိုမှီး။
စိတ်ပုတီးနဲ့ ယပ်ကြီးကိုင်၊ မဂ်လမ်းကို ဘယ်လိုဆိုင်ပ
၀တ်သင်းပိုင် မုန်ယိုကွက်တွေနှင့် တောထွက်ခင်ကြီး။''
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် သီလရှင်မယ်ကင်း၏ ဒွေးချိုးကိုဖတ်ရသောအခါ ဒေါပွသွားဟန်တူသည်။ တသက်လုံးက သူများကိုချည့်ချလာခဲ့၍ တယောက်တလေမှ ပြန်၍ မလှန်ရဲခဲ့သော ဗန်းမော်ဆရာတော်အဖို့ ယခုပထမဆုံးအကြိမ် သီလရှင်မယ်ကင်းက ပြန်၍နှံလိုက်သောအခါ ခပ်စပ်စပ် နာသွားဟန်တူသည်။ အရင့်သီးဆုံး စကားလုံးများဖြင့်ပြီးသော အောက်ပါဒွေးချိုးကို ပြန်လှန်ရေးစပ်၍ ပေးလိုက်လေသည်။
ဤသည်တို့ကား ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ ဟာသရသ ကဗျာများကို ကိုရင်ဘ၀မှ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ အစဉ်အတိုင်း ဖေါ်ပြ၍ပြီးပါပြီ။ သို့သော်စုံလင်ပြီဟူ၍ကား မဆိုနိုင်သေးပါ။ ကျန်ရှိနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းရသမျှ ဖေါ်ပြရဖြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆက်လက်၍ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဟောကြားခဲ့သော ဥပမာ ပုံပြင် ၀တ္ထုများကို သီးသန့်ခွဲခြား၍ ဖေါ်ပြပါဦးမည်။ ဥပမာ သမူဟဂီရက္ကမကျမ်းတွင်ပါရှိသော ဥပမာ ပုံပြင် ၀တ္ထုအစုစုတို့ကို ဖတ်ရှု လေ့လာတော်မူကြပါကုန်။
ဤဥပမာ ပုံပြင် ၀တ္ထုတို့ကို ဖေါ်ပြရာတွင် ခေတ်အစဉ်အတိုင်း မဟုတ်မူဘဲ အလျဉ်းသင့်သလို ဖေါ်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by စုချစ် at 11/10/2009 01:46:00 PM 1 comment:
သို့ဖြစ်၍ ဤတေးထပ်နှစ်ပုဒ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် ကာလအပိုင်းအခြားကို ခန့်မှန်းရသလောက် စစ်ကိုင်းချောင်အကြောင်းအရိပ်အမြွက်မျှ မပါခြင်း၊ တပည့်တပန်း အသင်းအပင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းများအကြောင်း တေးထပ်နှစ်ပုဒ်စလုံးတွင် မပါရှိကြခြင်း၊ တကိုယ်တည်း ဧကစာကျင့်ကာ ဘာဝနာပွားများမည်ဟု တေးထပ် ဆိုထားပါလျှက် ဆရာကင်း၏ လက်တွေ့ဘ၀မှာ တပည့်တပန်းများစွာနှင့် စာပေပို့ချမှုစခန်းတွင်သာ ကျင်လည်နေခဲ့ရခြင်းတို့ကြောင့် ဤတေးထပ် နှစ်ပုဒ်စလုံးမှာ ပျိုရွယ်စဉ်က ရေးသားခဲ့ကြသော တေးထပ်များ ဖြစ်သည်ဟုပင် ကောက်ချက်ချရပေတော့မည်။
သို့ဖြစ်လျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင်မယ်ကင်းတို့မှာ ငယ်စဉ်ကပင် သိကျွမ်းနေကြကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။ ဤမှတဆင့်တက်၍တွေးလျှင် ငယ်စဉ်က ရေးကြသော တေးထပ်နှစ်ပုဒ်စလုံး အပြန်အလှန် သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဆရာကင်း၏တေးထပ်မှာ (လောဘပယ်၍ မောဟမတွယ်တော့ပါ) (ဧကစာ ကျင့်သုံး၍ မဂ်လမ်းကိုရှာပါမည်) ဟု ရိုးရိုးသားသား ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ကိုယ်ရေးစပ်ထားသော တေးထပ်ဖြစ်ပါလျက် ဗန်းမော်ဆရာတော်က ဒေါသတကြီး ပက်ပက်စက်စက် တနည်းဆိုရလျှင် ဆဲရေးတိုင်းထွာ၍ ပြန်လည်ချေပ ရေးသားရသနည်း။ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ အဆိုအမိန့်အတိုင်း စာသင်ဘက် ပျိုရွယ်စဉ်ဘ၀က ချစ်ကြိုးသွယ်မိကြပြီး တကယ့်အရေးကျမှ ငြင်းပယ်လိုက်သော တေးထပ်ဖြစ်၍ စိတ်နာနာနှင့် ပက်ပက်စက်စက် ဆဲရေးတိုင်းထွာပြီး ပြန်လည်ချေပခြင်း ဖြစ်ရာသည်ဟု ယူဆရန်ပင် ရှိတော့သည်။
ဦးပဉ္စင်းဘ၀က ရေးစပ်သည်ဆိုသော တေးထပ်
ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ စာပေများတွင် ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း ဗန်းမော်ဆရာတော် ပဉ္စင်းတက်ကာစကရေးသော တေးထပ်ဟုဆိုသည့် တေးထပ်တပုဒ်မှာ အချို့စာအုပ်များတွင် ကြိုးကြားကြိုးကြား တခါတရံ တွေ့ရပေသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ စာပေစာစုများ၌ မတွေ့ရသည်မှာ ဖေါ်ပြရန်မသင့်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်ဟန်တူပေသည်။
ဤစာအုပ်သည် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ ဟာသရသ ကဗျာများနှင့် ပုံပြင် ၀တ္ထုများစုဆောင်းဖေါ်ပြလိုရင်း ဖြစ်ရာ ဗန်းမော်ဆရာတော်၏အခြားကဗျာ စာချိုးများထက်ပို၍ပင် ကြမ်းသည်ဟုမဆိုနိုင်သော ကဗျာတပုဒ်ကို မကြွင်းကျန်ရအောင် ဖေါ်ပြပါမည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော် ပျိုရွယ်စဉ်ဘ၀က ရေးသောစာ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်ပင် ဆုံးဖြတ်ကြပါလေ၊ ဗဟုသုတ အဖြစ်သာ ဖေါ်ပြလိုရင်းဖြစ်၍ မြှပ်ထားသော စာလုံးများကို ဖြည့်စွက်၍သာ ဖတ်ရှုကြပါလေကုန်။
အောက်ပါတေးထပ်မှာ ဗန်းမော်ဆရာတော်မဖြစ်မှီ ကိုရင်ဘ၀က ရဟန်းဘောင်သို့ တက်မည်ရှိသောအခါ သီလရှင်မယ်ကင်းအား ''ဘယ်နှယ်လဲ ပဉ္စင်းတက်ရတော့မလား'' ဟုမေးသည်ဆို၏။ မယ်ကင်းကအဖြေမပေး၍ ပဉ္စင်းတက်လိုက်ရပြီးနောက် စိတ်နာနာနှင့် (အောက်ပါတေးထပ်ကို) ရေးစပ်၍ မယ်ကင်းထံပို့လိုက်သည်ဆို၏။ ဤတေးထပ်ကို လက်ခံ ရရှိ ပြီးနောက် မယ်ကင်းသည် မျက်ဖြေတေးထပ်ဖြစ်သော (ဘိက္ခူနီ ဆရာကင်းက တဏှာကွင်းပစ်ပယ်) အစချီသော တေးထပ်ကို ဗန်းမော်ဆရာတော်လောင်း ပဉ္စင်းပျိုထံ ပေးပို့လိုက်သည်ဆို၏။ မယ်ကင်းတေးထပ်ကို ရသောအခါ ပဉ္စင်းပျိုက (ဘိက္ခူနီ ဆရာကင်းက တဏှာကွင်းစွတ်မယ်) ဟူသော တေးထပ်ဖြင့် ပြန်လည်ချေပခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ အတ္တနောမတိ သဘောကြိုက်ညီရာကို ယူကြပါကုန်။
ဗန်းမော်ဆရာတော် ပဉ္စင်းပျိုဘ၀က ရေးစပ်သည်ဆိုသောတေးထပ်
အထက်ပါ တေးထပ်မှာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသည် ဆိုရသော်လည်း နောက်ထပ် ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် မယ်ကင်းတို့ အပြန်အလှန်ရေးသော စာချိုးနှစ်ပုဒ်ထက်တော့ ဆိုးလိမ့်မည် မထင်ပေ၊ တေးထပ်ဟန်မှာ ဗန်းမော်ဆရာတော် မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏လက်ရာနှင့် အတော်ပင်နီးစပ်သော တေးထပ်ပင်ဖြစ်သည်။
''မနှစ်က ယခုတိုင်အောင် ချစ်ပါချစ်ပါဟု တောင်းဆိုသော်လည်း အပျိုထွားက နေနိုင်ရက်သည်။ နဂိုကစပြီး ယခုမှ ရက်စက်တော့သည်။ မမှန်လျှင် မကြံပါနှင့်။ ယခုမှ မင်းဘာကြောင့် ငိုရသလဲ'' ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ပါရှိနေသည်ကို ထောက်၍ (နဂိုကတော့စပြီး ချစ်ပါဆိုတော့လဲ မချစ်နိုင်၊ အခုလိုငြင်းပယ်တာဟာ ရက်စက်အားကြီးပါတယ်၊ မင်းငြင်းပယ်လို့ ငါပဉ္စင်းခံပြီးခါမှ ဘာပြုလို့ ငိုရတာလဲ) ဟူ၍သာ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရန် ရှိပေတော့သတည်း။
Posted by စုချစ် at 11/10/2009 01:40:00 PM No comments:
Posted by စုချစ် at 11/05/2009 10:41:00 PM7comments:
ရွှေစုချစ်... ထ... ထ အိပ်မနေနဲ့... ဟိုမှာ မသက်ဝေ က နင့်ကို စိတ်တွေတိုနေသယ်...။ ကမ္ဘာပျက်တော့မဲ့ဟာ ခုထိ အပျင်းထူ အိပ်နေလို့တဲ့.... သူရေးခိုင်းတာရေးလေတဲ့...။ နာတောင် ရေးပီးသွားပီဟဲ့... တော်ကြာနေ ဟ၀ှာပြုသွားလို့ နင်ရေးချင်တာလေး မရေးလိုက်ရပဲနေဦးမယ်တဲ့....
အာ... ချိုဂျီး ကလဲ... ပျက်ရင် နင်နဲ့ အစ်မ သက်ဝေ Mechanical ပိုင်း Hardware တွေ Design တွေ ဘာတွေ မှားနေလဲ အရင် ကြည့်ထားလိုက်...။ ပြီးရင် မမသီတာ က Electronics ပိုင်းကိုကြည့်ပေးလိမ့်မယ်...။ အဲသာတွေပြီးမှ အီဖေကိုယ်ရေးထားတဲ့ Firmware နဲ့ upgrade လုပ်ကြည့်မယ်...။ မရသေးရင် သေချာအောင် ဆရာကိုဧရာ ကို ဘာလိုလဲ ထပ်ပြီး စစ်ခိုင်း၊ ကွန်ဖန်းလုပ်ခိုင်း....။ ဆရာရေးတဲ့ Firmware နဲ့ဆို စိတ်သာချ... ဘယ်တော့မှ မပျက်ဘူး.... အီဖေကိုယ်တို့ရုံးမှာ သာမျိုး အများကြီး လုပ်နေကြပါဟယ်... မပူပါနဲ့.... ငှဲ ငှဲ ငှဲ....
ဒုန်း...ဒုန်း... ( အမသက်ဝေမှ စိတ်တိုတိုနှင့် စားပွဲထုသံ....)
အမလေးတော့ အစ်မသက်ဝေရ.... အခုပဲ ရေးပါတော့မယ်... မပျင်းတော့ပါဘူးတော့.... ဟိ...
အစားအစာ စုဆောင်းထားတဲ့ သူတွေ... ချိုဂျီးတို့ ဘာတို့နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေမှ... ကပ်စားလို့ရအောင်လေ.. ဟိ...
တကယ် ပျက်မှာဟုတ်လို့လားတော့... ကြည့်ရတာ.... ခုထိ အလန်းကြီးရှိသေး... သူများအတိုင်းပဲ... ခစ်...
ပရောဂျက်တားဂက်ကလိုပါသေးတယ်... အေးဆေးပေါ့... အဲလေ... ယောင်လို့ ..ဟီး... ရုံးနဲ့မှားသွားလို့...။ ဟိုးသင်းသွားခါနီးကျမှ ဟိုသင်းကပေါက် လိုက်ရှာတတ်သူ ကျမပါခင်မျ... အဲလေ... တော့... ။ အိတ်ကျတော့မှ စဉ်းစားဖို့ ပြင်ဆင်တော့မယ်လေ... အဟိ...
တောက်... တာကာရှီမာယာက ၆၅ဒေါ်လာတန် ဘူဖေး ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီး တခါမှ မစားမိဘူးလိုက်ဘူးတော့... ဟင့်...
အရင်သေတဲ့သူ သရဲလာမခြောက်ကြေး... ဂတိ... ခစ်...
ရီစရာစာအုပ်တွေ... အဲသာမှ တချိန်လုံး ဟာသတွေဖတ်ပြီး ရီနေရမှာ... ကမ္ဘာပျက်မှာတောင် မေ့နေမှာ... ဟာဟ...
ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းတွေ တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က ရေးသလိုလို ခပ်တည်တည်ရေးခဲ့မှ...။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာကြည့်ပြီး စုချစ်ဆိုတာ တယ်တော်တဲ့သူပါလားလို့ နောက်ကမ္ဘာကသူတွေက ထင်ကုန်ကြရော... ခစ်...
(၈) တွေးမိတွေးရာ အတွေး…
ဒါမှန်းသိရင် အပင်ပန်းခံ အန်ဂျန်နီယာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖူး... ခုတော့ မောလိုက်သာ.... ဟွန့်...
ဟယ်... သဌေး မဖြစ်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းလေစွ... တော်နေ ကမ္ဘာကပျက် ပိုက်ပိုက်တွေ ပိုက်ပြီး ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိဖြစ်နေတော့မှာ... ခိခိ...
ဒီကမ္ဘာပျက်တဲ့ထိ စုချစ်နေသွားတယ်ဟေ့.... ဘူးထွားထွား ဟားဟား.................................
အမသက်ဝေ... မမသီတာ ... ပြန်အိပ်တော့မယ်နော်...
ခေါ... ခလော... ခေါ...
တကယ်အတည်ရေးရရင်တော့... မေးခွန်းအားလုံးအတွက် အဖြေက တစ်ခုထဲပါရှင်...
ကိုယ့်မိသားစုရယ် ချစ်ခင်ရသူတွေရယ် အားလုံး တစုတဝေးထဲ စိုးရိမ်၊ ထိတ်လန့်၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေဖျောက်ရင်း တရားသတိနဲ့ ကမ္ဘာရဲ့နောက်ဆုံးတလကို နေသွားကြရတော့မှာပေါ့... နော်...
သတိတရ တက်တဲ့ မမသီတာနဲ့ အစ်မသက်ဝေကို ပုံလေးတွေဆွဲပေးထားတယ်... မလှရင် စိတ်ဆိုးနဲ့နော်...
Posted by စုချစ် at 11/03/2009 03:53:00 PM9comments:
Posted by စုချစ် at 10/23/2009 09:49:00 PM7comments:
Posted by စုချစ် at 10/18/2009 01:27:00 PM 1 comment:
Posted by စုချစ် at 10/16/2009 09:04:00 AM7comments:
Posted by စုချစ် at 10/14/2009 09:47:00 AM No comments:
Posted by စုချစ် at 10/14/2009 09:41:00 AM 1 comment:
Posted by စုချစ် at 10/09/2009 08:37:00 PM 11 comments:
Posted by စုချစ် at 10/08/2009 10:01:00 AM No comments:
Posted by စုချစ် at 10/05/2009 01:09:00 PM9comments:
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:24:00 PM4comments:
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:21:00 PM No comments:
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:13:00 PM No comments:
Source- Sanp Shot Journal
ဆရာကံချွန် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။
တနေ့ကပဲ အမေစုသတင်းကို လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှာဖတ်နေရင်း ဆရာကံချွန်ပုံလေးနဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်မိလိုက်သေးတယ်။ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်တော့ တော်တော်လေးပိန်သွားတာမို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမိတယ်။
အဲဒီမှာ အင်တာဗျူးတဲ့သူရဲ့ ထော်လော်ကန့်လန့်မေးခွန်းတွေကို ကိုယ်ကစိတ်ပျက်စွာဖတ်ရင်း နောက်ဆုံးဖြေခဲ့တဲ့ ဆရာ့အဖြေကို အတော်လေး နှစ်ခြိုက်မိပါရဲ့...
မေး - ဆရာကံချွန်တို့ရဲ့ ဟံသာဝတီသတင်းစာခေတ်၊ လူထုသတင်းစာခေတ်အကြောင်း ဆရာကံချွန်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခန်းဂဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဖွယ်လေးတွေ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
ဖြေ- အဲဒါအရှည်ကြီးပဲဗျ။ သတင်းထောက်တွေစုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ကြည့်။ ဟံသာဝတီကောပေါ့။
ဆရာ့ရဲ့ ဘနဲ့ဘွားစွာရယ်၊ ကျော်မင်းဟန်ရယ်ကတော့ ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မဲ့ဇာတ်ကောင်တွေမှုတ်ပါဘူး။
ဆရာရဲ့ “ကာတွန်း ကံချွန် တကိုယ်တော်ပြပွဲ ၂၀၀၉” ကျင်းပခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးနေ့. (၂၀-၀၈-၂၀၀၉).. ပွဲပြီးတဲ့နေ့မှာဘဲ ဆုံးသွားခဲ့သတဲ့။
မသေခင်အချိန်ထိ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဖက်တွယ်သွားသူ ဆရာကံချွန် ကောင်းရာသုဂတိမှာ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ...
Posted by စုချစ် at 8/21/2009 08:46:00 AM3comments:
အမသက်ဝေက Tag ထားတယ်...။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး... အားရင် ရေးပေးနော်...တဲ့။ ဘလော့မှာ သူများတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Tag လုပ်ပြီးရေးခိုင်းတာတွေ ဖတ်ရရင် ကိုယ်ကလည်း အားကျတယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဘလော့ကာတွေကို ကိုယ်သိချင်တဲ့ topic အကြောင်း Tag ပြီး ရေးခိုင်းချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှာက ဘလော့ရှိလို့ ဘလော့ကာနံမည်သာခံထားရတာ၊ အသိအကျွမ်းကနည်းပါးလှ။ နံမည်ကြီးဘလော့ကာတွေကို သူရို့ကိုသာ ကိုယ်ကသိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုမည်သူမျှ မသိကြတော့ မTag ၀ံ့။
Tag ကြတဲ့အထဲမှာလည်း တခါမျှမပါဝင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဟီး ...ဘယ်သူမှ Tag မဲ့သူမရှိလို့။ အခုတော့ အမသက်ဝေ ကျေးဇူးနဲ့ ပထမဆုံး Tag ခံရလို့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာကိုစလုပ်ရရင် ကောင်းမလဲ၊ တော်ပါပြီ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး...
ဘလော့၊ ဖိုရမ်၊ မြန်မာအိုးလုပ်ငန်း၊ Arts movement...
ပုံမှန်က ရုံး နဲ့ အိမ်၊ အိမ်နဲ့ ရုံး...
ဒီပိတ်ရက်တော့ ပန်းချီ စတူဒီယို မသွားမဖြစ်လို့ သွားရတယ်။ ပြီးတော့ လျှောက်လည်ပစ်တယ်...
This love between you and me is simple asasong...
မှားတာကို မှားမှန်း မသိသူတွေ...
အမေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်...
မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် မညီသော အရပ်...
ပန်းချီစတူဒီယိုတခု ထောင်ချင်တယ်။ အောက်ထပ်မှာ ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မယ်...
ဘာပြောကောင်းမလဲ… သူရို့ဘဲ ရှိတယ်…
ကွန်ပြူတာ.. ပြောရရင် အင်တာနက်… ဂေါ်ဂဲ...
ဘာသိလို့လဲ… ဂေါ်ဂဲမှာ လိုချင်တာ အားလုံးရှာလို့ရတယ်…
how to deliver baby ဆိုပြီး ကလေးမွေးနည်းတောင်ရှိတာကြီးကိုး...
အမေနဲ့ အတူတကွ ဦးကြီး၊ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ မောင်လေး၊ ညီမလေးတို့ ဘေးရန်ကင်းပါစေ...
Posted by စုချစ် at 8/17/2009 08:09:00 AM7comments:
ထူးအိမ်သင် ၅နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ...
ဒီဆောင်း မြောက်လေ မြူးသည်...
Posted by စုချစ် at 8/14/2009 10:50:00 AM4comments:
ဗန်းမော်ဆရာတော်ကို ဗန်းမော်သို့ ပို့ရသနည်း
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးသည် သာသနာရေး ဘက်တွင်၎င်း၊ ပညာရှိများကိုဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုတွင်၎င်း၊ အလွန်ချီးကျူးဘွယ်သော မင်းတပါးပင်ဖြစ်သည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် မင်းတုန်းမင်းတို့သည် သက်တော်မတိမ်းပင်ရှိကြလေသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော် (၁၁၆၈ -၁၂၃၉) နှင့် မင်းတုန်းမင်း (၁၁၇၆-၁၂၄၁) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏အကြောင်းကိုငယ်သိ၊ အစင်းသိဖြစ်သည်။ နော်တော်ပုဂံမင်းလက်ထက်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရား၏ ဖြတ်ထုံးရေးရဟန်း၊ စာဆိုရဟန်းဖြစ်၍ ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် ရဟန်းပျိုဘ၀ကပင် ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ ထင်ရှားသောကိုယ်တော် ဖြစ်ရသည်မှာ မလွဲပေ။ ဗန်းမော်ဆရာတော်၏တိကျပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်တတ်သော သဘောကြောင့်၊ သုဓမ္မာဆရာတော်များ အဖွဲ့တွင် မထည့်သွင်းဝံ့၍သာ မထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်အားကိုးကွယ်မှု၊ ဗန်းမော်ဆရာတော်အပေါ် သည်းခံမှုတို့ကိုကြည့်ရှုလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်က ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ လူကဘုန်းကြီး (-) ကဓါးပြဟူ၍ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဆိုလိုက်ခြင်းကိုလည်း ပြုံးပြုံးကြီးသာ ခံခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ဝန်ကြီးများအား ချိုကျိုးနားရွက်ပဲ့ များဖြစ်အောင်ဖေါ် ထုတ်မှုတွင်၎င်း၊ သုဓမ္မာဆရာတော်များကို ပျက်ရယ်ပြုရာတွင်၎င်း၊ မင်းတုန်းမင်းသည် ခတ်မဆိတ်နေခဲ့ခြင်း၊ ဗန်းမော်ဆရာတော်အား ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဆည်းကပ်ခြင်း မလျော့ပါးကြောင်းကိုထောက်၍ သိသာပေသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဗန်းမော်သို့ ပို့ရသနည်း
သို့ဖြစ်လျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်အား အဘယ်ကြောင့်နယ်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်သနည်း။ ဤအချက်သည် အရေးကြီးပေသည်။ မင်းတုန်းမင်းကိုယ်တိုင်က ရှမ်းကလေးကျောင်း ဆရာတော်အား ပြုစုစေခဲ့သောဝိနိစ္ဆယစာတမ်းကို သုဓမ္မာဆရာတော်များ စစ်ဆေးကြည့်ရှုအတည်ပြု၍ သာသနာပိုင်ဆရာတော်၏ အတည်ပြုချက် ထပ်မံရယူပြီး တိုင်းပြည်ရှိ ရဟန်းသံဃာအားလုံးကိုလိုက်နာရန် ထုတ်ပြန်လိုက်သော အချိန်ကျခါမှ ဗန်းမော်ဆရာတော်က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းမှာ မင်းတုန်းမင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကို၎င်း၊ သုဓမ္မာဆရာတော်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို၎င်း၊ များစွာကျဆင်းစေသည့် ကိစ္စဖြစ်လာသည်။ ထိုကိစ္စအတွက် မင်းတုန်းမင်းတွင် သော်၎င်း၊ သုဓမ္မာဆရာတော်များတွင် သော်၎င်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုအတွက် အဖတ်ဆယ်ရန် ဗန်းမော်ဆရာတော်အား ၀န်ခံတောင်းပန်စေရလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်မှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားမည်မဟုတ်ဘဲ၊ မင်းတုန်းမင်းနှင့်တကွ သုဓမ္မာဆရာတော်များ၏ သိက္ခာကိုဆယ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ သာသနာပိုင် ဆရာတော်အား တွေ့ဆုံ စစ်ဆေးမေးမြန်း၍ မိမိရေးကြောင်း ၀န်ခံစေရန် စီမံခဲ့သော်လည်း ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် ၀န်မခံရုံမျှမက သာသာနာပိုင်ဆရာတော်အားလျှင်ပင်...
ဟူ၍ပင် သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားအား ပြန်လှန်၍ကော်လိုက်သောအခါ မင်းတုန်းမင်း၊ သုဓမ္မာဆရာတော်များသာမကတော့ပဲ၊ သာသနာပိုင် ဆရာတော်ဘုရားပင်လျှင် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းရပေတော့သည်။
ဤသို့ပင်မည်သူမျှ မနိုင်နိုင်အောင် မည်သူမျှပင် မကြောက်၊ ဂရုမစိုက်၊ ရိုသေမှု၊ လေးစားမှု၊ ဂါဝရမရှိတော့သော ဗန်းမော်ဆရာတော်ကို နေပြည်တော်တွင် ဆက်လက်ရှိနေပါက ရှေ့အဘို့သာသနာရေးကိစ္စ၊ တိုင်းပြည်ကိစ္စတို့တွင် ဘာမျှလုပ်၍ ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်တော့ချေ။ ဤအချက်မှာ မင်းတုန်းမင်းဘက်မှနေ၍ တွက်ကြည့်ရသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။
သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဟူသည်မှာ သံဃာ့ရာဇာ သံဃာတို့၏ ဘုရင်ပင် ဖြစ်ရပေမည်။ မင်းတုန်းဘုရင်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ဥပဒေအမိန့်ဖြင့် ကွတ်ညှပ်ထုတ်ဆင့် အပြစ်ဒဏ်ပေးသော် သင့်လျှော်၏။ ရဟန်းသံဃာများအား မင်းသည် မအုပ်ချုပ်ထိုက် ဟူ၍ သံဃာတော်တို့၏မင်းအဖြစ် သာသနာပိုင်ဆရာတော်တပါးရွေးချယ်ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရှိလျှင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သော မင်းသည်ပင်လျှင် သာသနာပိုင် ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒကိုနာခံရပေမည်။ သေပြစ်၊ သေမိန့် ကျပြီးသော ရာဇ၀တ်သားများကိုပင် သာသနာပိုင် ဆရာတော်၏ အမိန့်ဖြင့် သေပြစ်၊ သေမိန့်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင်ပေသည်။
ဤသို့ပင် သံဃာ့ရာဇာဖြစ်သော သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကိုပင် ပျက်ရယ်ပြုရုံမျှမက ရုန့်ရင်းသောစာချိုးဖြင့် သရော်ပြောင်လှောင်ခြင်းခံရသည့်အခါတွင် သံဃာတို့အား အုပ်ချုပ်မှု ပျက်ပြားစရာ အကြောင်းတပါး ဖြစ်လာတော့သည်။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်အား နေပြည်တော်မှ ဝေးရာသို့ နယ်နှင်ဒဏ် ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဤသို့ဗန်းမော်ကိုပို့လိုက်ရသော်လည်း အစစ၊ အရာရာ လိုလေသေးမရှိ ဆွမ်း၊ ကွမ်းမှစ၍ ပြည့်စုံအောင် စီမံပြီးမှ ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုထောက်၍ ရာဇ၀တ်ပြစ်ဒဏ်ဖြင့် ဗန်းမော်သို့ ပို့ခြင်းမဟုတ်၊ သာသနာပိုင်ဆရာတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခြားသံဃာများအပေါ် သြဇာမကျဆင်းစေခြင်းငှာသာလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်အား ဗန်းမော်သို့ ပို့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗန်းမော်ဆရာတော်အား ဗန်းမော်သို့ပို့ခြင်းမှာ ပြစ်ဒဏ်အနေနှင့် ပို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ နေပြည်တော်အတွင်းရှိ သံဃာတော်များကိုထိန်းသိမ်းမှုရစေရန်နှင့် ခဏတဖြုတ်မျှ နားအပူသက်သာစေရန် ရည်ရွယ်ဟန်တူပေသည်။
Posted by စုချစ် at 7/21/2009 08:21:00 AM5comments: